Global Voices teny Malagasy » Mangorona mena: fankalazana ny taombaovao shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Febroary 2020 5:33 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Noubel Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Taiwan (ROC), Fivavahana, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Eo am-panolorana emboka manitra ao amin'ny Tempoly Grand Matsu  (大天后宮) ao Tainan, Taiwan. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Miovaova isa-taona ny daty fankalazana noho ny fiankinany amin'ny fanisana andro manara-bolana sy masoandro  ary mifanandrify amin'ny fipoiran'ny volana vaovao  ao anatin'ny vanim-potoana manomboka amin'ny faran'ny hjanoary ka hatramin'ny tapaky ny volana febroary. Izany ihany koa no antony hamariparitana azy amin'ny anarana samihafa sy hankalazana azy ao amin'ny kolontsaina aziatika atsinanana. Voambolana iraisana iray, ampiasaina indrindra indrindra ao Shina, ny Fetiben'ny Lohataona (春节). Ny Vietnamiana mampiasa ny voambolana Tết  (izay midika hoe fety ary avy amin'ny anarana feno hoe Tết Nguyên Đán na ‘Fetin'ny maraina voalohany amin'ny andro voalohany’), raha lazain'ny kolontsaina Tibetana ho Losar  (ལོ་གསར་, midika ara-bakinteny hoe ‘Taona Vaovao’) kosa. Ankalazaina amin'ny fomba ofisialy ao Taiwan, Japana, Korea Atsimo, Singapaoro, ary avy amin'ireo ampielezana mpiteny shinoa manerana izao tontolo izao ny taombaovao manara-bolana.
Avy amin'ny angano  iray milaza bibidian'arirarira iray nantsoina hoe ny Nian  hanafika ny mponina ao an-tanànakely iray sy hihinana azy ireo no niaingan'ity fankalazana ity — rehefa nisy lahiantitra iray, izay nitafy mena indrindra, nanambara fa hiambina ny tanàna izy amin'ny alina ary namelona tsipoapoaka, izay nampandositra ilay bibidia. Avy amin'izany no nahatonga ho fomba ny mitafy sy mampiseho mena, ary tahaka izany ihany koa ny mampiasa tsipoapoaka mba hanesorana ireo ‘onja miiba’ rehetra tao amin'ny taona nialoha azy, ary avy amin'izany dia mba ho ny tsara no ho tonga rehefa avy ny (taona) vaovao.
Ao amin'ny fomban-drazana shinoa, aseho amin'ny alalan'ny iray amin'ireo biby miavaka  miisa 12 ny taona tsirairay. Ny taombaovaon'ny taona 2020 dia manamarika ny fandalovana avy amin'ny taonan'ny kisoa mankany amin'ny taonan'ny voalavo, izay biby voalohany amin'ny tsingerin'ny taona miisa 12.
Ny ivombesatry ny fankalazana ny taombaovao dia ny fiarahan'ny fianakaviana misakafo izay mila ny rehetra ao amin'ny fianakaviana, tsy anavahana taranaka, hiangona amin'ny toerana iray mba hiaraka mihinana. Miavaka araka ny toetany sy ny nahandro ao an-toerana ny sakafo aroso amin'izany. Any Shina avaratra, matetika izany atao kimofomofo, antsoina hoe jiaozi , raha amin'ny kolontsaina shinoa atsimo kosa dia ahitana mofomamy be lakiremin'ny taombaovao antsoina hoe niangao . Indreto ny sasantsasany amin'ireo nahandro nentim-paharazana avy ao avaratra:
Araka ny fanarahana antokon-kitana shinoa, misariohatra sy mamariparitra izay andrasana amin'ny taona ny biby tsirairay — ary raha mino ny vintana shinoa isika , dia mampanantena ny hahaliana ny taona 2020: “Amin'ny maha-biby mahay sy mahatsapa tsara ny tontolo iainany sady mahafantatra ny fotoana ihetsehana, iray amin'ny marika tsara indrindra amin'ny antokon-kitana shinoa ny voalavo.”
Olona iray mahafehy tsara ny fijerena ny ho avy amin'ny felantanana, monina ao Hong Kong, no manolotra faminaniana amin'ny antsipirihany  ho an'ny marika antokon-kintana tsirairay: “Momba ny fikarohana ny lalàna sy ny fikorianan'izao rehetra izao izany. Rehefa hainao ny mikajy azy, dia azonao atao ny milaza mialoha ny fironan'ny zavatra rehetra.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/02/03/146724/
 Tempoly Grand Matsu: https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Matsu_Temple
 fanisana andro manara-bolana sy masoandro: https://en.wikipedia.org/wiki/Lunisolar_calendar
 amin'ny fipoiran'ny volana vaovao: https://www.history.com/topics/holidays/chinese-new-year
 biby miavaka: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_zodiac
 mino ny vintana shinoa isika: https://www.japantimes.co.jp/life/2020/01/01/lifestyle/new-year-new-opportunities-expect-year-rat/#.XivtUhdKjBI
 manolotra faminaniana amin'ny antsipirihany: https://edition.cnn.com/travel/article/fortune-guide-2020-chinese-zodiac-sign/index.html